कोरोना जित्ने उपाय, चिन्ता नलिने, आत्मबल बलियो बनाउने – Karnalikhabar
वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. कपिलदेव उपाध्याय चौतर्फीरूपमा कोरोना फोबिया देखिएको बताउँछन्। ‘समस्यासँग जुध्न समयमा आन्तरिक शक्ति वृद्धि गर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘आत्तिने होइन, अहिलेको समय त समस्याहरूसँग लड्नका लागि आत्मविश्वास बढाउने हो।’
विकसित मुलुकमा पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न धौधौ परिरहेका बेला नेपालमा के होला भन्ने सोचाइ धेरैमा देखिन्छ। एकातर्फ नेपालमा भाइरस देखिएको छैन भनेर आत्मबल बढाइरहेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ अमेरिका र युरोपमा पनि त थिएन भन्ने तर्क गर्नेहरू छन्। ‘विकसित मुलुकमा पनि नियन्त्रणमा हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने हामीकहाँ आयो भने के होला ?’ डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘यसको आकलन गर्दै आतंकित हुनेहरू धेरै छन्।’अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
अघिल्लो - अब परीक्षामा ३० नम्बर ल्याए मात्रपनि पास
कोरोना परीक्षणमा अमेरिकाले पायो ठूलो सफलता - पछिल्लो